Jawbone oo kabaxaaya ganacsiga tira koob | Wararka IPhone
Jawbone wuxuu ka baxaa ganacsiga tirada
Suuqa tirada ayaa muddo dheer soo shaac baxay, gaar ahaan markii smartwatches ay caan ku noqdeen dadka isticmaala, maaddaama dad badani ay rabeen inay awood u yeeshaan inay la socdaan dhaqdhaqaaqooda jidh ahaaneed iyagoo adeegsanaya hal aalad, laakiin kumuu talo gelin ama uma baahnin inuu iibsado saacadda casriga ahlaakiin waxaad kaliya rabtay jijin fudud oo kuu oggolaan doonta inaad sidaas sameyso.
Jawbone wuxuu ka mid ahaa hormoodkii keenay keenista jijimooyin suuqa, ganacsi markii dambena ku fiday ku hadalka wireless-ka. Laakiin intii uu ku guda jiray xirfaddiisa dhibaatooyin kala duwan ayuu la soo kulmay, gaar ahaan qalabka loo soo xulay soo-saarkooda, taas oo mararka qaarkood u keenta gubasho dadka isticmaala.
Laakiin waxa dhab ahaan u dhaawacay isaga ayaa ah imaatin badan oo soosaarayaal ah suuqa, Daahfurka aalado leh shaqooyin la mid ah laakiin qiimo ka qiimo badan kana adag shirkadda Jawbone. Way cadahay inaysan awoodin inay si dhakhso leh ula jaanqaado baahiyaha suuqa, mana aysan ku guuleysan inay ku guuleysato dareenka isticmaaleyaasha daneynaya aaladda noocaan ah kuwaasoo doorbiday Fitbit, shirkadda hadda iibisa jijimooyinka ugu tirada badan. adduunka oo dhan. iyadoo 4,8 milyan oo unug la iibiyey rubucii koowaad ee sanadka.
Hal-abuurnimo la'aanta ka jirta shirkadda ayaan awoodin inay ka hortagto shirkaddu waxay luntay kala bar qiimadeedii muddo sannad gudaheed ah. Intaas waxaa sii dheer, delo kii ugu dambeeyay ee uu ka bilaabay suuqa, jijin qiimeyn ah oo qiimeheedu yahay 120 euro waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu xun ee aan ka heli karno suuqa. Sidoo kale uma adkeysana biyaha. Dhammaan go'aannadan si liidata loo gaarey waxay ku qasbeen shirkadda inay ka tagto howlihii ay xoogga saareysay illaa hadda oo ay isku daydo inay dib isu soo celiso. Maaddaama madaxa Jabone Hosain Rahman uu u warramay Tech Insider, ujeeddada shirkaddu waxay diiradda saari doontaa abuurista dhar la gashado oo loogu talagalay caafimaadka, ma ahan oo keliya la socodka jimicsiga jirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Jawbone wuxuu ka baxaa ganacsiga tirada
AirPort-ka cusub ee Apple wuxuu kuu noqon karaa jawaabtaada Amazon Echo iyo Google Home
Imtixaanka ugu dambeeya ee adkeysiga ee iPhone 6s iyo Galaxy S7